इनार कहाँ र कसरी बनाउने ? – WASHKhabar
इनार कहाँ र कसरी बनाउने ?
२६ आश्विन २०७७, सोमबार १०:२० 281 पटक हेरिएको
काठमाडौ : भूमिगत पानी तान्ने विभिन्न खाले ईनारहरू हुन्छ । सबैभन्दा साधारण चाहीं हातले खनेको कुवा हो । सबैभन्दा महङ्गो चाहिं धेरै गहिरोसम्म पाइपको सहायताले धारा राखी पानी तान्ने किसिमको पम्पलाई भनिन्छ ।
♦ ईनार खन्नु पूर्व यो सबैको पानी आपूर्ति गर्न सक्ने ईनार हो भनी सुनिश्चित गर्नुपर्दछ । इनारको पानी निम्न लिखित अवस्थामा खनेमा असुरक्षित हुन जान्छ ।
♦ चर्पीको धेरै नजिकमा, ढलको पाइप, फोहर थुपार्ने खाल्डो वा गाईबस्तु राख्ने ठाउँको नजिकमा खनेको ईनार राम्रो हुँदैन । ईनार यी सबैभन्दा कम्तिमा ३० मिटर टाढा राख्नु पर्दछ ।
♦ उद्योगधन्धा संचालन हुने ठाउँ, खानी संचालन हुने ठाउँ, तेल उत्खनन् हुने ठाउँ, अत्याधिक रसायनिक मल एवं विषादीको उपयोग हुने खेतबारीको नजिकै वा फोहरमैला बिसर्जन गर्ने ठाउँमा ईनार खनेमा ।
♦ फोहर पानी तथा सतही पानी बगेर ईनारमा मिसिने अवस्थाको ठाउँ ।
साधारण सुधारबाट पानीलाई संक्रमित हुनबाट जोगाउन सकिन्छ । उदाहरणको लागि सफा भाँडो र डोरी मात्र ईनारको पानी झिक्न प्रयोग गर्ने । कुवाको चारैतिर माटो राख्ने, ईट्टा वा ढुङ्गाबाट बनेको रिङ्ग हालेर पानीलाई सुरक्षित गर्न सकिन्छ । कुवाको सतहलाई चिल्लाएर कुवा खस्नबाट र सुक्नबाट रोक्न सकिन्छ र गहिरो ईनार बनेर बढी पानी संकलन गर्न सकिन्छ ।
कुवाको पानी कहिल्यै सिधैं पिउनु हुँदैन । पानीलाई कपडाले छानेर वा केही बेरसम्म स्थिर रहन दिएर पनि जीवाणुहरूलाई हटाउन सकिन्छ ।
ईनार कहाँ खन्नु पर्दछ ?
ईनारको भित्तामा पर्खाल वा रिङ लगाउने